I-HDR ene-Photoshop, sikubonisa ukuba usisebenzisa njani esi siphumo kwiifoto zakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Namhlanje siza kufunda indima edlalwa yi-HDR kwiziphumo ze-Photoshop.
Ngaphambi kokuba siqale kufuneka sicacise ukuba esi siphumo siya kufumaneka kwiinguqulelo zamva nje zeFotohop, ngokuqala ngohlobo lwe-CS6 ngakumbi.
Kuqala, siya kwimenyu Uhlengahlengiso loMfanekiso kwaye siya kuyifumana khona, eye.
I-HDR ibandakanyiwe ukuyila Iinkcukacha ezithe kratya kwimifanekiso yethu, ukongeza umnxeba wokukhanyisa kunye nezithunzi, kunye neenkcukacha ngokunjalo.
Xa singena kolo khetho siza kubona ukuba kuvela iwindow enkulu yokungena, ehlala phantse yonke ikhusi phezulu. Kwaye ngokungagqibekanga umfanekiso uthatha iimpawu ezithile.
Ikhetho Indlela usazisa ngeendlela ezahlukeneyo zokuhlela i-HDR:
Ukubonakaliswa kunye ne-gamut kusinika ukuba sitshintshe iimpawu ezimbini zomfanekiso.
Ukucinezelwa kokukhanya akusayi kusivumela ukuba sihlele, kodwa kushiya isiphumo esingagqibekanga.
Ukulungelelaniswa kwendawo Yiyo leyo esiza kuyichaza, apha sinokuhluka ngokuqaqamba kwemigca efumaneka emfanekisweni, ithoni kunye neenkcukacha, kunye nokunye.
Siqala nge Imigca yemifanekiso. Apha silungisa kwakhona Radius kunye noMkhosi. Ngelixa izinto zangaphambili zifiphaza ngakumbi isiphumo esiza kusinika amandla, eyokugqibela ichaza kwaye icacise umfanekiso wethu ngakumbi.
Sinike imigca amandla amaninzi kunye nokufiphaza okuncinci kubo.
Ke ngaphakathi Ithoni kunye neenkcukacha Siza kubona uluhlu, umboniso kunye neenkcukacha. Uluhlu kunye nokuvezwa asikaze sitshintshe kuba zizinto ezinamandla kakhulu khanyisa umfanekiso okanye ungene emanzini ebumnyameni. Kodwa iinkcukacha, ngokuchaseneyo, kufuneka zahluka ukusukela ngoku ivumela ukuba sichaze ngakumbi, okanye ngaphantsi, iinxalenye ezahlukileyo zomfanekiso, ukufumana into egqithisileyo kwinkcazo, okanye ukufiphala okungakumbi njengamaphupha.
Ukuya kukhetho oluphambili, sibona olo khetho lwaziwayo njenge ukukhanya nesithunzi, kunye neenketho ezisinceda ukuba sisuse okanye sibeke kancinci umbala kunye nokuqina emfanekisweni. Sigxininise izithunzi, sisuse ubungqongqo obuncinci kunye nexabiso elincinci lokugcwalisa, ngaphandle kokushiya buthuntu ngaphandle kombala.
Apha ngezantsi unepeyinti efana naleyo Amagophe esiye sazithiya kwezinye iifundo apha kwi-Intanethi kwi-Intanethi, ezinokuthi zizixhase ngomfanekiso olungileyo ukuba sifumana ijika ebonisiweyo. Into elungileyo apha kukuba ukuba sishiya sivule ukhetho lwe Imbonisosinako jonga esikwenzayo kwaye uhlehlise ngaphambi kokucofa KULUNGILE.
Kwaye yiloo nto isiphumo se-HDR emalunga nayo, ngethamsanqa ngoku ezinye ii-mobiles ziyibandakanyileyo, kodwa ukuphinda ungene kwi-Photoshop akukhathazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukufota » I-HDR ene-Photoshop